mairie-antananarivo – Fanadiovana Faobe – Faritra Isotry sy ny manodidina
administrateur 19 jona 2018 Commentaires fermés
Hetsika fanairana ny mponina mba hahalala madio
Teny amin’ny faritra Isotry sy ny manodidina indray no nanohizan’ireo hery velona rehetra avy ao amin’ny Boriboritany Voalohany ny hetsika Fanadiovana faobe ny andron’ny Talata 19 Jiona 2018. Hetsika izay natao ho fifampitaizana sy ho fanairana ny tsirairay mba samy hitandro sy hanaja hatrany ny fahadiovana.
Araka ny nambaran’ny Delegen’ny Boriboritany Voalohany Andriamatoa RAHARIVELO Tiana Harilaza dia:« efa maro ny hetsika fanadiovana faobe izay efa natao teto anivon’ny Boriboritany, ankehitriny kosa dia tsy mitsahatra ny manentana ny mponina izahay mba samy ho sarotiny amin’ny fahadiovana ary hanana fahasahiana miteny raha mahatsikaritra olona manarinary fako eny rehetra eny ». Mahafinaritra hoy izy ny miasa sy miaina ao anaty tanàna madio koa samia mandray ny andraikitra tandrify azy ny tsirairay. Ny Kaominina Antananarivo Renivohitra kosa etsy ankilany dia iezaka ny hanisy dabam-pako manerana ny Tanàna.
Aoriana ny fetim-pirenena izany hoe ny Alarobia faha 27 Jiona 2018 dia efa manentana ireo mponin’Antananarivo Renivohitra sahady ny tompon’andraikitra avy ao amin’ny Boriboritany Voalohany mba samy hiaraka hientana amin’ny fanadiovana goavana izay karakarain’ny Kaominina Antananarivo Renivhotra. Tanàna hiaraha-manana mantsy Antananarivo koa samia saro-piaro amin’izany fahadiovan’ny Tanàna izany.